EU: Midowga Yurub oo ku heshiiyey inay sare u qaadan awoodooda Milatari – idalenews.com
EU: Midowga Yurub oo ku heshiiyey inay sare u qaadan awoodooda Milatari
Brucless(INO)- Wadamada gaaraya 28ka dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa ku heshiiyey mashruuc cusub oo ay ku labo jibaarayaan awoodooda milatari, go’aankan oo ah fariin ku socota Maraykanka.
Qorshahan ayaa u muuqda mid Midowga Yurub uu doonayo inuu uga kaaftoomo taageerada dhinaca militari ee isbaheysiga NATO, xili dalalka Yurub ay si weyn uga feejigan yihiin dhaq dhaqaaqa militari ee uu wado dalka Ruushka.
Madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump ayaa horey u sheegay xiliguu uu ololaha ku jiray in ciidamada Maraykanka aysan gacansiin doonin dalalka kale ee xubnaha ka ah NATO hadii aysan dhaqaale badan siin Maraykanka, arrintaasi oo hada u muuqato in EU-da ay jawaab u heshay.
Midowga Yurub ayaa sare u qaadaya dhaqaalaha ay ku bixiyaan iibsiga hubka casriga ah iyo waliba dhismaha hub iyaga u gaar ah, waxayna sheegeen in mashruucan uu socon doono illaa sanadka 2027, waa mashruucii ugu weynaa ee Midowga Yurub bilaabo muddo 10 sano ah.
Go’aankan ayaa kusoo beegmaya todobaadyo kadib markii Madaxweynaha xilka kasii dagaya ee Maraykanka Barack Obama socdaalkiisii ugu danbeeyey ee ku yimid Yurub, wuxuuna Obama xiligaasi diirada saarayey sidii uu kalsooni buuxda usiin lahaa xulafada Maraykanka ku leeyahay Yurub inaysan wax walaac ah ka qabin in Maraykanka uu mar walba taageero militari la garab taagan yahay.
Hase yeeshee Midowga Yurub ayaa hada u muuqda inay qaateen go’aan ah inay gaaraan isku filnaasho buuxda oo dhanka militariga ah. Waxayna arrintan keeni kartaa loolan cusub oo ka dhex bilowda shirkadaha hubka soo saara ee Maraykanka iyo kuwa Midowga Yurub.
Donald Trump: “Qaxootiga Soomaalidu ma ahayn in ay Maraykanka joogaan”